I-Med District, i-Oak Lawn, i-Ustown Restlaxing Loft - I-Airbnb
I-Med District, i-Oak Lawn, i-Ustown Restlaxing Loft
Xa iyi-240 Mbps, iqela lakho lonke lingafowuna ngevidiyo lize libukele iividiyo kwi-intanethi.
Wamkelekile kumbindi weOak Lawn! I-Condo yethu ethe cwaka, noxolo kukuhamba nje ibanga elifutshane ukusuka kwiivenkile ezininzi kunye nokutya kwaye iyakwazi ukuya kuyo yonke iDallas.
Iyunithi enamabali amabini ineefestile ezinkulu ezifumana ukukhanya kwemvelo okwaneleyo kodwa kukho imipheme emnyama yabantu abalala emva kwexesha. Igumbi lokuhlala eline-futon, indawo yokutyela, kunye nekhitshi elilungisiweyo ziphantsi kunye negumbi lokulala elivulekileyo, indawo yokusebenzela kunye nebhafu epheleleyo ziphantsi.
Ngaphantsi kweemayile eziyi-1 ukusuka kumzila wokuhamba othandwayo + ukufikelela kwipuli, ibhayisekile, iintsimbi kunye nemethi ye-yoga.
Le yindlu enamabali amabini enendawo yokuhlala, yokutyela nekhitshi kumgangatho osezantsi kunye negumbi lokulala elikhulu + negumbi lokuhlambela elipheleleyo kumgangatho ophezulu. Ndibeke amagumbi avulekileyo anedesika enkulu nesitulo saseofisini esitofotofo, iskrini esiphathwayo sokuququzelela umsebenzi usekhaya, nesitulo sokuphumla esitofotofo ukuba ufuna ukuphumla phezulu uze ufunde ngasefestileni enelanga.
Umgangatho osezantsi unekhitshi elinento yonke netafile encinci yokutyela (abantu abayi-4) kunye nefuton kunye neTV encinci eneRoku firestick. Ukuba unayo nayiphi na imibuzo ngale ndlu nceda ungathandabuzi!
I-wifi ekhawulezayo – i-240 Mbps
Indawo engummelwane weOak Lawn eDallas ineevenkile zokutyela ezintle neebhari ezintle ibe ikwiiblokho nje ezimbalwa ezikude nepaki yeTurtle Creek kunye neekhilomitha eziyi-3 ezenziwe ngamaplanga iKaty Trail edibanisa iAmerican Airlines Centre (AAC). Iindawo ezidumileyo zase-Ustown, e-Dawn Ellum, e-Knox Henderson, nase-Victoria Park zikumgama omfutshane.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Dallas